यी हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण देखिएका १३६ स्थान (सूचीसहित) – Sanchar Patrika
काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ९८२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म उपत्यकामा ९ सय ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये काठमाडौंमा ७ सय ६६, भक्तपुरमा ८२ र ललितपुरमा १ सय ३४ जना छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा हाल उपचारारत अवस्थाका अर्थात सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ सय ४६ छ । जोखिममा रहेको जिल्लाहरूको सूचिमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १३६ स्थानमा संक्रमण देखिएको छ । ५ देखि ९ जनासम्म संक्रमित देखिएका स्थान २४ छ । यस्तै १० देखि १२ जना संक्रमि भएका स्थान ४ छ । काठमाडौँको नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय, कालीमाटी, बागबजार र सामाखुसी क्षेत्रमा संक्रमित संख्या १० भन्दा बढी छ ।
यस्तै बालाजु, बाँसबारी र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि ७/७ जना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । बूढानीलकण्ठ, धुम्बाराही, घट्टेकुलो, कोटेश्वर, माछापोखरी, नक्साल, पुतलीसडक, सीतापाइला, बालुवाटार, काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, कुपन्डोल, टोखा र थानकोट क्षेत्रमा पनि संक्रमित पाइएका छन् । अनामनगर, बल्खु, बालुवाखानी, बौद्ध, भंगाल, चाबहिल, दक्षिणढोका, इमाडोल, जोरपाटी, कलंकी, कीर्तिपुर, सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै बाफल, बसुन्धरा, भोटाहिटी, भोटेबहाल, च्यासल, क्षेत्रपाटी, दुवाकोट, धापासी, डल्लु, डिल्लीबजार, गोठाटार, गहनापोखरी, कपन, खुमलटार, कुलेश्वर, लगनखेल, महाबौद्ध, न्युरोड, नयाँबजार, पेप्सीकोला, रातोपुल, सुनाकोठी, ठैंबलगायतका स्थानका केही एकाध व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । उपत्यकाका अन्य ७० स्थानमा पनि पछिल्लो दुई सातामा कम्तिमा एक जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै देशका मुख्य शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढेपछि मानिसको अत्याधिक भीड हुने क्षेत्रहरु सिल गरिएको छ । शुक्रबार मध्य रातिदेखि उपत्यकाको पहिलो व्यापारीक केन्द्र असन, इन्द्रचोक, टेकु र न्यूरोड क्षेत्र सिल गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार शुक्रबार राति १२ बजेदेखि यी व्यापारिक क्षेत्रहरु सिल गरिएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमित भेटिएका तथा अति जोखिम क्षेत्रहरु सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Prevको’रोनाकै क’ह’रकाबीच बागलुङमा उच्च ज्व’रो आएर अस्पताल पुगेका बि’रामीमा देखियो अर्को रो’ग
Nextबुधबार दर्ता हुने छ विश्वको पहिलो कोभिड–१९ भ्याक्सिन
५५८ वर्ष पछि रक्षावन्धनमा बन्दै छ शुभसंयोग, यी राशिको लागि हुनेछ अत्यन्त शुभ !
लकडाउन खोलेर यसरी जनजीवन सुरक्षित बना‌औँ – डा. रवीन्द्र पाण्डे